iimpazamo eziqhelekileyo CNC kwinkqubo servo iziko machining - China Changzhou Zhanhang International
Njengoko sonke sisazi, inkqubo servo iziko machining na inkqubo ebonelela ngamandla isixhobo kumatshini. Ngaphandle iziko machining inkqubo servo, lo workpiece azinako ukuba zingenziwa. Ngoko ke, inkqubo servo ibaluleke kakhulu kwiziko machining. Xa inkqubo servo akaphumeleli, imveliso machining lulonke kufuneka ayeke. Namhlanje, Xiaobian iya kusebenza njengentshayelelo kwiimpazamo eziqhelekileyo kwinkqubo machining iziko servo.
Iziko machining ukusilela kwinkqubo servo iindlela ziquka izikhombisi alarm kunye izithonga fuse kwi iyunithi isantya kwi ulawulo lwamanani kunye alarms itshintshela ezahlukeneyo yokhuseleko tsiba. Intsingiselo kwizalathisi alarm yahluka kunye kuyilo iyunithi yolawulo isantya. Ngokubanzi, kukho ezi ndidi zilandelayo:
1. Le yangoku enkulu, ebangela isixhobo umatshini ukuya alarm. A alarm elikhulu ngoku kwenzeka. Kukho ezimbini ezinokwenzeka phantsi kweemeko eziqhelekileyo, oko kukuthi, i alamu elikhulu yangoku zibangelwa yi umonakalo wesekethe nelifutshane candelo drive igunya phezu CNC ulawulo isantya unit iziko machining.
Kwakhona 2. ombane High iza kubangela alarms isixhobo umatshini. Kukho ngokubanzi amathuba amathathu alarms aphezulu ombane. Kusenokwenzeka ukuba CNC igalelo ombane kweziko machining idlula 10% yexabiso rated, okanye ukusebenza ubushushu ngayo imoto servo uya kuthotywa, okanye ombane aphezulu abangelwa komgca yeyunithi machining iziko yokusebenza zokulawula isantya.
3, i ombane iphantsi kakhulu, ebangela alarms isixhobo umatshini, amathuba kweziko loo machining kunqabile kakhulu, oku isenokuba ombane igalelo ongaphantsi kwe-85 pesenti ixabiso rated, okanye uqhagamshelo amandla akulunganga.
4. I ingxelo ndlela yokuqhuba ngesantya ubhaqo ibuhlungu kwaye i alarm kubangelwa. Le meko ubala, ngenxa yokuba lo moya akukho ngxaki, kwaye kukho ingxaki kwinkqubo Ubhaqo ingxelo. Inkoliso alamu lukupelo umgca isantya bengxelo ye CNC servo lwemoto iziko machining. Broken okanye okubangelwa kukudibana abangamahlwempu kumgca Ubhaqo bengxelo.
5. yotshintsho ukhuseleko iyazingenela alarm. I khuselo isixhobo yokukhusela isixhobo umatshini. Umzekelo, ombane enkulu litshise amanye amacandelo kunye namanye amanyathelo likaxakeka ukuba ayikwazi mazilawulwe isixhobo kumatshini. Xa nazo ezi meko, i ukhuseleko ziza kuvuselelwa ukuphepha umonakalo Component ezingeyomfuneko, efana stop ekhuselekileyo.
6. alarm Umthwalo osindayo, ityala le alarm omninzi kukuba CNC umthwalo mechanical kweziko machining aziqhelekanga, okanye elilelona liphezulu kwiqondo motor ngoku kwi iyunithi yolawulo isantya isetelwe ephantsi kakhulu. Le umazibuthe asisigxina motor umazibuthe esisigxina iya kubangela i alarm sindisa. Ukuba imoto kweziko machining ngaphandle wagaleleka iduma, kuya kuba nzima ukuba ngesandla okanye uphendule shaft, nto leyo ethetha ukuba umazibuthe esisigxina akanandaba.
7. fuse kwi CNC ulawulo isantya unit kweziko machining iphetshethelwe okanye uhambo full wesekethe.